Android 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများအားလုံးကို မြန်မာစာအဆင်ပြေမှန်စွာ သွင်းပေးနိုင်မည့် Myanmar Mobile Zawgyi Changer2v1.0.5 ထွက်ရှိ | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Posted on October 26, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
–MMAS Zawgyi Changer2ရဲ့ အခြား feature တွေအနေနဲ့ကတော့ Smart Zawgyi နေရာမှာ အခြား font တွေဖြစ်တဲ့ Zawgyi font , Zawgyi Flower font, Zawgyi Dancing font , Sony Zawgyi font နဲ့ စံမြန်မာဖောင့်တွေပါဝင်ပြီး ယင်း font ခြောက်မျိုးစလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းသုံးနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
–အရင် version တွေလို မူရင်းဖောင့်(ဥပမာ-တရုတ်ဖောင့်များ)ပျောက်မသွားအောင်လည်း ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
This entry was posted in Android Tools. Bookmark the permalink.
← မည်သည့် Android ဖုန်းတွင်မဆိုထည့်သွင်းနိုင်မည့် Smart Zawgyi3ထွက်ရှိ…
Facebook ရဲ့Free Application နဲ့ တစ်ယောက် ကွန်ပြူတာကို တစ်ယောက် ထိန်းချုပ်ကြမယ် →